पक्राउ परे गौचनका हत्यारा, को हुन् उनीहरु ? « Deshko News
पक्राउ परे गौचनका हत्यारा, को हुन् उनीहरु ?
निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचनको हत्यामा संलग्न पाँच जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
प्रहरीले आइतबार गत असोज २३ गते गौचनलाई बानेश्वर, प्रयागमार्गमा गोली हान्ने नुवाकोट, पञ्चकन्या गाउँपालिका–५ का राजिव स्याङताङसहित पाँचजनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो ।
गोली प्रहारलगत्तै गौचनलाई तत्काल सिभिल अस्पताल पु¥याइए पनि चिकित्सकले मृत घोषित गरेका थिए । प्रहरीले सबै अभियुक्त पक्राउ परिनसकेको र अनुसन्धान जारी रहेकाले घटनसँग सम्बन्धित सबै विषय अझै स्पष्ट नभइसकेको जनाएको छ । रासस